Izindaba - Izinhlobo ezivamile zokushintsha ezisetshenziselwa ukukhiqiza ngogesi
Uma unentshisekelo yokuthola okwengeziwe ngama-microswitches, usekhasini elifanele. Kulesi sihloko, sizobheka izinhlobo ezahlukahlukene zokushintshwa okuncane. Lokhu kuzokusiza ukhethe iyunithi elifanele ukuhlangabezana nezidingo zakho zephrojekthi. Le ndatshana izokunikeza ukuqonda okujulile ngezinhlobo ezi-6 zalawa madivayisi. Ake sibahlole ngamunye ngamunye. Funda ukuze uthole okuningi.
Okubalwe ngezansi yizinhlobo eziyisithupha zalawa manyunithi. Yize konke lokhu kunemisebenzi efanayo yokwenza, kukhona umehluko phakathi kwemiklamo yabo. Lokhu ngumehluko obenza bahluke komunye nomunye.
1. Izibona ezincane
2. Inkinobho Yokucindezela Inkinobho
3. Rocker Ishintsha
4. rotary Ishintsha
5. Amaswidi weSilayidi
Ukushintshwa okuncane kungukushintshwa okuncane okunenkinobho ye-lever noma ye-push. Lawa manyunithi awadingi umzamo omningi womzimba ukuze asebenze kahle. Njengoba lezi zincane impela, zenzelwe ukusetshenziswa okuncane kwamaphrojekthi.
2) Uhlobo lwe-Push Button
Lawa mayunithi angatholakala ngezitayela eziningi nangokwakheka okuningi. Ngaphandle kwalokhu, izinhlobo ezahlukahlukene zezinto ezisetshenziswayo ukuzenza. Uma ucindezela inkinobho, ivula noma ivale isekethe. Ungakhetha kusuka ohlotsheni lwesikhashana noma lwe-latching. Ukuhlala kwamuva kuvuliwe noma kuvaliwe inqobo nje uma ungacindezeli futhi.
3) Uhlobo lwe-Rocker
Uma ucindezela lolu hlobo lweswishi, luzonyakazisa inkinobho yedivayisi ukuze uvale oxhumana nabo. Ngokufanayo, uma unyakazisa iswishi ngakolunye uhlangothi, kuzovula isekethe. Futhi, lawa madivayisi atholakala ngezindlela ezahlukene nezitayela. Isibonelo, ungayithola ngokulungiselela okubili: isigxobo esiphindwe kabili noma isigxobo esisodwa.
4) Uhlobo lwe-Rotary
Njengoba igama liphakamisa, lolu hlobo lweyunithi lubandakanya ukuhambisa oxhumana naye. Ungakubona ngeso lengqondo ukudayela kumpheki ukuze uthole ukuqonda okungcono kokuthi lokhu kushintsha kusebenza kanjani.
5) Uhlobo lwesilayidi
Amaswidi wesilayidi afaka isibonisi esincane. Uma ufuna ukuvula noma ukuvala isekethe ngaphakathi kwensiza, udinga ukushelelisa isibambo ngaphakathi. Njengoba zingamayunithi ahlanganisiwe, kungaba nokukhetha okuhle kumasekethe amancane wamaphrojekthi, ikakhulukazi lapho udinga khona ukushintsha. Isibonelo, lawa madivayisi asetshenziswa kakhulu kujantshi ukushintsha amathrekhi esitimela esingenayo.
Isikhathi Iposi: Sep-05-2020
Inkinobho Push Micro Shintshela, Ukushintsha Amandla Shintsha, Guqula Shintsha, I-Push Button Footswitch, Micro Push Inkinobho Micro Shintsha No Nc Ndawonye, Guqula i-switch switch,